ထီပေါက်ရင် မင်္ဂလာချက်ချင်းဆောင်မယ့် သားဂန်း အကြောင်း ပြောပြတဲ့ ဘေဘီမောင် – ချယ်ရီပန်း
သားလေးက အဖိုးတွေအဖေတွေနဲ့ပိုတူတယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုကျောင်းတော်ရဲ့ သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရတဲ့ လီမင်ဟို
အနုပညာအလုပ်ပါးနေတဲ့အချိန် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဘဝအခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ ယွန်းရွှေရည်
သားလေးက မားမားလို့ မခေါ်တတ်ပေမယ့် ပါးပါးလို့တော့ ခေါ်တတ်နေပြီဆိုတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
ထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်အရမ်းကြီးနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းသွားတဲ့ ပိုင်တံခွန်
နောက်ရှစ်နှစ်လောက်မှ ကလေးယူမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
အထူးချွန်ဆုံးရခိုင် အမျိုးသားဆုကို ချီးမြင့်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ နေတိုး
အဓိဌာန်အောင်လို့ ဦးဇင်းဝတ်ဖြစ်တာ ဆိုတဲ့ ဟိန်းမင်းသူ
တအားပေါတဲ့ ဟာသကားတွေ မရိုက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ ရဲတိုက်
ခေးနဲ့ပုံတွေကို troll ကြတဲ့ အပေါ် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး
တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ အတတ်နိုင်ဆုံး ရွက်လွှင့်သွားတော့မယ့် လင်းလင်း
ကျောက်ကပ်အစားထိုးချင်လို့ ရသမျှ အလှူငွေတွေစုထားပေမယ့် အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကစ်ကစ်
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကို တကယ် အရမ်းချစ်တာလို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဒေါင်း
စုဖုရားလတ်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်မယ့် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
အိမ်ထဲနေရင်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားကို ယားယံစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းများ
မီတာခက တက်သင့်တယ်လို့ ထောက်ခံလိုက်တဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
ရည်းစားထားရင် ပါးချည်းပဲ ရိုက်ခံရမှာဆိုတဲ့ ပိုင်တံခွန်
ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ငယ်ငယ်က တင်ပါးအကိုင်ခံရလို့ကြောက်ပြီးငိုခဲ့ရတဲ့ နေခြည်ဦး
သားလေးကသူ့ကို မေမေ မခေါ်ဘဲ သဲသဲ လို့ခေါ်တယ် ဆိုတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
ငါ့ရည်းစားပိုမိုက်တယ် သီချင်းကို ပုဆိုးတွေနဲ့ အပြတ်ကဲနေကြတဲ့ စိုင်းစိုင်းတို့အဖွဲ့
သင်ဇာဝင့်ကျော်က တော်ရုံအသည်းကွဲမယ့် မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ပိုင်တံခွန်
သူတင်လိုက်တဲ့ပို့စ်ကြောင့် အမေတွေ အမတွေတောင် စကားမပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့ လှနုထွန်း
ကျောင်းမှာ နန္ဒာလှိုင်မရောက်ခင် စောရောက်ခဲ့လို့ Queen ရခဲ့တာ ဆိုတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
Facebook Account Hack ခံရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခင်လှိုင်
ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ မလုပ်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ Maeya Sunsun
Song Hye Kyo ကို အသိမပေးပဲ ကွာရှင်းခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ Song Joong Ki
စိုင်းစိုင်းရဲ့ တောဂေါ်လီ သီချင်းကို အပီဟဲပြီး ကနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဘာသာစကား ၅ မျိုးလောက် တတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းယွန်း
Rဇာနည်နဲ့ချစ်စနိုး အခေါ်အဝေါ်တွေ အကြောင်းကို ပြောပြတဲ့ ဝမ်း
သမီးလေးနဲ့ တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ Video call ပြောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဘုဏ်းသိုက်
ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ထုတ်ရောင်းနေတဲ့ ပိုပို
သားကို အထူးကုဆရာဝန် ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ The Whole Burma First မောင်ကျော်လင်းသန်း ရဲ့ မိခင်
တွဲရိုက်ရမယ့် ကိုရီးမင်းသားက ကလေးလိုနုနေကြောင်းပြောပြတဲ့ ကျော်ထက်အောင်
ဆေးခြောက်ကို တရားဝင် ခွင့်ပြုသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ဗျူဟာ
အရမ်းရွံစရာကောင်းတဲ့ စော်ကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆိုဖီယာ
စပွန်ဆာလုံးဝမယူဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ
တက္ကသို​​​​​​​လ် ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာ အမှတ်အများဆုံးရရှိသူများ
လူတော်တော်များများ သတိမထားမိကြတဲ့ ဒူးရင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး ၆ ခု
တရားစွဲ ခံလိုက်ရလို့ တရားပြန်စွဲလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ချစ်သူတွေကြားမှာ နားလည်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး
အသံကြိုးရောင်လို့ အလုပ်ခဏနားရမယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ပိုးမီ
အပြင်ထွက်လည်ရလို့ပျော်နေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့သားလေး လီယမ်
ဘာဝတ်ဝတ် Fashionကျနေတယ် ဆိုတဲ့ စည်သူ(ပလက်ကျွတ်)
ထိပ်ထားသခင်လေးကို သူအသေးစားလေးလို့ထင်မိတယ်လို့ပြောတဲ့ ဖွေးဖွေး
အောင်ရဲလင်းကို crush တယ်ဆိုတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
နောက်​ဆုံး​ပေါ်​ခေတ်​စားလာတဲ့ ကြက်​သီးထဖွယ်​ရာ အလှပြင်​နည်းတစ်​မျိုး
ချမ်းချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘဝမှာအမှတ်ရဆုံးကိစ္စနှစ်ခုကိုပြောသွားတဲ့ ဘုဏ်းသိုက်
Single in the bus လို့ပြောလိုက်တဲ့ စူးရှထက်
သူ့မျက်နှာတပ်ပြီး Troll ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးလေးကို မေတ္တာပို့လိုက်ပြန်တဲ့ စိုင်းစိုင်း
ဖေဖေလင်းလင်း နဲ့တူတူ ဂီတာတီးပြီး ကနေကြတဲ့ ခေတ် နဲ့ သစ်
အိချောပိုက အရမ်းချောတော့ အိုက်တင်လုပ်ရတာ ရှက်တယ်ဆိုတဲ့ ထိုင်းမင်းသား Bankk
အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်မယ့် မင်းမော်ကွန်းရဲ့သမီး
သူများအလုပ်ကို လှောင်ပြောင်တာမျိုးတွေကို မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး
ကြည့်မိသူတိုင်း အဖျားတက်သွားမယ့် နန်းမွေစံရဲ့ အတိုင်းသားဖက်ရှင်
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကလေးလေးတွေလို သီချင်းတူတူဆိုနေကြတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်းနဲ့ အိမ့်ချစ်
သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်ရင် သီလရှင်ထပ်ဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို
ဒေးဗစ်ကျော်၊ကျော်ကျော်နန္ဒနဲ့ ညီဘွားညီကို တွဲမြင်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲ
ထီပေါက်ရင် မင်္ဂလာချက်ချင်းဆောင်မယ့် သားဂန်း အကြောင်း ပြောပြတဲ့ ဘေဘီမောင်
ပရိသတ်တွေ မမှတ်မိလောက်အောင် ပုံစံပြောင်းထားတဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင်
မြင်သူတိုင်း အားကျသွားစေမယ့် အမိုက်စားအိမ်အတွင်းခန်းပုံရိပ်တွေကို ပြသလိုက်တဲ့ ဇေရဲထက်
ခေါက်ဆွဲခြောက်စားခြင်းက ကလေးတွေကို အခြောက်ဖြစ်စေနိုင်
မသေမချင်း အကယ်ဒမီ ဆုရအောင် ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Underwear နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ပြောလာတဲ့ အောင်ရဲလင်း
Facebook အကောင့်ကို မန်နေဂျာတွေကိုပဲပေးသုံးထားတယ်ဆိုတဲ့ မိုးဟေကို
ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ သမီးလေး အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် ငယ်ငယ်
ချစ်သူရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာကို ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
မဲမပေးလို့ ခွေးကိုက်ခံရပြီမလား ဆိုတဲ့ပို့စ်ကို ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ထက်ထက်ထွန်း
မစိမ့်ထက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ နောက်ဆုံးဈာပနမြင်ကွင်းများ
မြင့်မြတ်နဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး
အမေရှိတုန်းလေးကျေးဇူးဆပ်ချင်လို့ ကျောင်းထွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ ဇွန်ပြည့်
မေမေဆူလို့ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျပြီး ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ချောရတနာရဲ့ သားလေး
အန်တီကစ်ကို လှူတာကတော့ ပေါ်ပြူလာလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
Live လွှင့်ပြီး သတ်သေပြမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်
ဝိတ်မတက်အောင်ထိန်းတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ဗိုက်မကြီးပဲနဲ့ကလေးတွေကို မေတ္တာဘာလို့မထားနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အောင်သူရဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မယုံကြဖို့ ပြောလာတဲ့ ပိုးအိအိခန့်
ပညာရေးမှာ ထူးချွန်လွန်းတဲ့ သမီးငယ်လေးအတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဖေဖေခင်လှိုင်
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ Asia Special Award ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
မြန်​မာပြည်​အထိ လာ​တွေ့တဲ့ ချစ်​သူကို က​လေးတစ်​​ယောက်​လို ကြိုဆိုခဲ့တဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ဗီဒီယို
ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုအလွတ်ရွတ်ဆိုပြီး အိပ်ယာဝင်ချိန်ဘုရားရှိခိုးနေကြတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့သမီးလေးတွေ
အသက် ၆၀ ပြည့်မှ လက်တွဲကြမယ်လို့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ကတိပြုထားတဲ့ Kenny Ho (သို့မဟုတ်) ကျန်ကျောင်း
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း နှင့် ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်များ…
စစ်​ကိုင်းတိုင်း​ ကန့်ဘလူမြို့တွင် လူခြောက်ကလေး မွေးဖွား
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ နာမည်ကို ငွေလိုရတီလို့ မခေါ်ဖို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ ငွေမှုံရတီ
တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ မီဒီယာတွေကြောင့် အောင်မြင်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
သမီးတွေနဲ့ တူတဲ့ အဖေမို့လားမသိဘူး အိပ်နေတာတောင် ချောနေတယ်ဆိုတဲ့ ဖေဖေလင်းလင်း
ကိုယ်တိုင်ဂစ်တာတီးပြီး မေမေအူဝဲကို Birthday Wish လုပ်လိုက်တဲ့ သားသားလေး ပြေဓီရ
.ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ
.ဝက်ခြံ ၊ ဆားဝက်ခြံ နှင့် ချွေးပေါက် ကျယ်တာတွေအတွက် အစွမ်းထက် ခရမ်းချဉ်သီးနည်းလမ်း
ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်ဖို့ KTV ခန်းတွေထိသွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း
အိမ်ထောင်သက် (၆) လအတွင်း ချစ်ဇနီးလေး ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ ရင့်ကျက်လာမှုတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ရွှေထူး
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ပိုရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ
မယုံဘူး ဆိုသူတွေတောင် ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေတဲ့ “နီးကပ်လာသော တဘောင်နှစ်ခု”
ဇာတိမြေမှာ ရုပ်ရှင်ရုံဆောက်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ နေတိုး
ညီမကိုဝင်ဆဲနေတဲ့သူတွေက ပညာတတ်တွေများတယ်ဆိုတဲ့ သင်းသင်း
မိသားစုက Birthday Surprise လုပ်ပေးမှုကြောင့်ကြည်နူးပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အူဝဲရဲ့ Video လေး
မွန်မြတ်လှတဲ့ မွေးနေ့ကုသိုလ်အလှူလေးကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ချစ်သူနဲ့အတူ မောဒိုက်ကမ်းခြေမှာ သာယာနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး တင်ပြီး ရိုပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့စုံတွဲ
သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်ရောက်ရန် ချစ်သူ အောင်လနဲ့အတူ တစ်ရက်တည်းမှာ ဆံချခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
ကိုရီးယားရဲ့လမ်းမထက်မှာ ကွေးနေအောင် ကခဲ့ကြတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်
မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းကို ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
By admin	 June 4, 2019 June 5, 2019 No Comments
အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင်တို့ရဲ့ မနဲ့မောင် အချစ်ရေးကတော့ သာယာလို့ နေပါတယ်။ သီချင်း MTV ရိုက်ရင်း စခင်သွားခဲ့တဲ့ သူတို့နှစ်ဦးက အနုပညာလမ်းမှာ တူနှစ်ကိုယ် အားပေးရင်း ချီတက်လာတာပါ။ နှစ်ဦးသား ခရီးတွေ တူတူသွားရင်း ကံစပ်လို့ ထီပေါက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဘေဘီမောင်က ခုလို ပြောပြသွားပါတယ်။
“ထားဝယ်မှာ သီချင်းသွားဆိုရင်းနဲ့ သားဂန်းနဲ့ ဘေဘီ လမ်းမှာ တူတူ ထီထိုးမယ်။ ပေါက်ရင်လည်း လှူလို့ရတယ်ဆိုပြီး ထိုးတာ မင်္ဂလာစုံတွဲကျတော့ ပေါက်စရာများတယ်လေ။ တစ်အုပ်ပဲ ကျန်တော့တယ်ဆိုလို့ ယူလိုက်တာ ပေါက်သွားတယ်။” လို့ ဆိုပါတယ်။
ထီမပေါက်တဲ့အတွက် သားဂန်းရဲ့ ဆန္ဒမပြည့်တော့ကြောင်းလည်း ဘေဘီမောင်က ခုလို ဝမ်းနည်းဖွယ် ပြောပြသွားပါတယ်။“သူကလေ ထီပေါက်ရင် မင်္ဂလာချက်ချင်းဆောင်မယ်တဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ သနားရှာပါတယ် ငါးသောင်းပဲ ပေါက်တော့ လှူလိုက်တယ်။ ကိုယ်တွေ နောင်ဘဝတွေမှာ သူ့လို လူမျိုးနဲ့ ဆုံတွေ့ချင်လို့ အလှူလုပ်ပြီး ဆုတောင်းဖြစ်တယ်။ ထီပေါက်တယ် ဆိုကတည်းက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ အကြောင်းပါတယ်လေ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဝမ်းသာပါတယ်။” ဆိုပြီး ပြောပြသွားပါတယ်။
ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ ချစ်သူလေးကို ရထားတဲ့အကြောင်း ဘေဘီမောင်က ခုလို ကြွားလုံးလေး ထုတ်သွားပါတယ်။“ကံစပ်တယ်ဆိုတာက အခု သူသူကိုယ်ကိုယ် ပရိသတ်က အားပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ရည်းစားထားရင် တစ်ချို့တွေက အားမပေးတော့တာ ရှိတယ်လေ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဘေဘီလည်း အစတုန်းက ပရိသတ် လျော့သွားမလားဆိုပြီး ကြောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘေဘီက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေပြီး ရိုးသားမှုကို ချပြခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ပရိသတ်က လက်ခံခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သားဂန်းကလည်း အမြင်ကတ်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောင်လေး မဟုတ်ဘူး။ အေးတယ် ရိုးတယ် ကိုယ့်စကားတစ်ခွန်းပဲဆိုတော့ ပရိသတ်ကလည်း သူ့ကို ချစ်တဲ့ အခါကျတော့ သူနဲ့ပေါင်းပြီး ပရိသတ်လက်ခံတယ် ဆိုကတည်းက ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ ယောက်ျားလေးလို့ ပြောလို့ ရတယ်။” လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်ကြီးကရော ဘေဘီတို့ စုံတွဲကို သဘောတူလား။
The post ထီပေါက်ရင် မင်္ဂလာချက်ချင်းဆောင်မယ့် သားဂန်း အကြောင်း ပြောပြတဲ့ ဘေဘီမောင် appeared first on Nanmalgyi.
အဆိုတျော သားဂနျးနဲ့ သရုပျဆောငျ ဘဘေီမောငျတို့ရဲ့ မနဲ့မောငျ အခဈြရေးကတော့ သာယာလို့ နပေါတယျ။ သီခငျြး MTV ရိုကျရငျး စခငျသှားခဲ့တဲ့ သူတို့နှဈဦးက အနုပညာလမျးမှာ တူနှဈကိုယျ အားပေးရငျး ခြီတကျလာတာပါ။ နှဈဦးသား ခရီးတှေ တူတူသှားရငျး ကံစပျလို့ ထီပေါကျခဲ့တဲ့ အကွောငျး ဘဘေီမောငျက ခုလို ပွောပွသှားပါတယျ။
“ထားဝယျမှာ သီခငျြးသှားဆိုရငျးနဲ့ သားဂနျးနဲ့ ဘဘေီ လမျးမှာ တူတူ ထီထိုးမယျ။ ပေါကျရငျလညျး လှူလို့ရတယျဆိုပွီး ထိုးတာ မင်ျဂလာစုံတှဲကတြော့ ပေါကျစရာမြားတယျလေ။ တဈအုပျပဲ ကနျြတော့တယျဆိုလို့ ယူလိုကျတာ ပေါကျသှားတယျ။” လို့ ဆိုပါတယျ။
ထီမပေါကျတဲ့အတှကျ သားဂနျးရဲ့ ဆန်ဒမပွညျ့တော့ကွောငျးလညျး ဘဘေီမောငျက ခုလို ဝမျးနညျးဖှယျ ပွောပွသှားပါတယျ။“သူကလေ ထီပေါကျရငျ မင်ျဂလာခကျြခငျြးဆောငျမယျတဲ့ ။ ဒါပမေဲ့ သနားရှာပါတယျ ငါးသောငျးပဲ ပေါကျတော့ လှူလိုကျတယျ။ ကိုယျတှေ နောငျဘဝတှမှော သူ့လို လူမြိုးနဲ့ ဆုံတှခေ့ငျြလို့ အလှူလုပျပွီး ဆုတောငျးဖွဈတယျ။ ထီပေါကျတယျ ဆိုကတညျးက ဘာပဲဖွဈဖွဈ သူနဲ့ အကွောငျးပါတယျလေ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဝမျးသာပါတယျ။” ဆိုပွီး ပွောပွသှားပါတယျ။
ကောငျးကြိုးပွုတဲ့ ခဈြသူလေးကို ရထားတဲ့အကွောငျး ဘဘေီမောငျက ခုလို ကွှားလုံးလေး ထုတျသှားပါတယျ။“ကံစပျတယျဆိုတာက အခု သူသူကိုယျကိုယျ ပရိသတျက အားပေးနတေဲ့အခြိနျမှာ ရညျးစားထားရငျ တဈခြို့တှကေ အားမပေးတော့တာ ရှိတယျလေ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ ဘဘေီလညျး အစတုနျးက ပရိသတျ လြော့သှားမလားဆိုပွီး ကွောကျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘဘေီက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနပွေီး ရိုးသားမှုကို ခပြွခဲ့တဲ့ အခြိနျမှာ ပရိသတျက လကျခံခဲ့တယျ။ ပွီးတော့ သားဂနျးကလညျး အမွငျကတျစရာ ကောငျးတဲ့ ကောငျလေး မဟုတျဘူး။ အေးတယျ ရိုးတယျ ကိုယျ့စကားတဈခှနျးပဲဆိုတော့ ပရိသတျကလညျး သူ့ကို ခဈြတဲ့ အခါကတြော့ သူနဲ့ပေါငျးပွီး ပရိသတျလကျခံတယျ ဆိုကတညျးက ကောငျးကြိုးပွုတဲ့ ယောကျြားလေးလို့ ပွောလို့ ရတယျ။” လို့ ဆိုပါတယျ။
ပွောခငျြလှနျးလို့ ပရိသတျကွီးကရော ဘဘေီတို့ စုံတှဲကို သဘောတူလား။
The post ထီပေါကျရငျ မင်ျဂလာခကျြခငျြးဆောငျမယျ့ သားဂနျး အကွောငျး ပွောပွတဲ့ ဘဘေီမောငျ appeared first on Nanmalgyi.
By admin July 9, 2019 July 9, 2019